Kenya oo amni darro darteed u hakisay mashruucii dhismaha Safaaradeeda Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Kenya oo amni darro darteed u hakisay mashruucii dhismaha Safaaradeeda Muqdisho
Dil ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo Ee Xarunta Gobolka Mudug.
Ciidanka Kumaandooska DANAB oo howlgal kafuliyeyb shabeelada hoose
Madaxweyne Laftagareen Oo Kulan Laqaatay Safiirka Itoobiya U Fadhiga Soomaaliya.
Garoonka diyaaradaha Buulo-burte Oo Burbur Xoogle Soo Gaaray(Sawirro).
Booliska Canada Oo Dad U Sooqabay Dilkii Muwaadin Soomaaliyeed.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in amni darro awgeed u hakisay mashruucii dhismaha ee Safaaradeeda Muqdisho, sida ay shaacisay Wasiiradda Arrimaha Dibadda.
Aamina Maxamed oo la hadlaysay Guddiga Difaaca iyo Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka Kenya ayaa sheegtay in mashcruuca dhismaha safaarada uu soo bilowday bishii Agosto ee sanadkii 2015, laguna waday in la dhameystiro dhamaadka sanadka 2016.
Dhismaha Safaaradda Kenya ayaa ka koobnaa xafiisyo, deegaanka Safiirada iyo afar guri oo ay degi lahaayeen Shaqaalaha Safaaradda.
Wasiiradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegay in sababahay loo hakiyay mashruucaas uu yahay caqabada dhinaca ammaanka, hase ahaatee waxaa ay tilmaamtay in 35% dhismaha la dhameystiray.
Kenya ayaa ku dhawaaqday bishii March ee sanadkii 2014 inay dib uga furaneyso Muqdisho safaaradeeda, si ay u xoojiso xiriirkii diblomaasi ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Go’aanka dib u dhiska howl galkeeda Soomaaliya ayay sheegtay in Soomaaliya ka cawinayo inuu dib uga soo kabto dagaalada halakeeyay dalkaas, oo dhowaan doortay Madaxweyne cusub.
Kenya ayaa safaaradeeda Soomaaliya si KMG uga howl galeysay magaalada Nairobi, kaddib markii uu dhacay bur burkii oo ay si rasmi ah u xirtay Safaaradii ay ku laheyd Muqdisho sanadkii 1991.
Qarax gaari oo saaka ka dhacay degmada Wadajir
Bambaano lagu weeraray guri uu degenaa Mas’uul ka tirsan dowladda
Kooxo ku hubeysnaa Bastoolad ayaa goordhow Nin la sheegay inuu shacab ahaa ku dilay gudaha Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, waxaana falkaas kasoo baxaya faah faahino dheeraad ah.
Dilka loo geystay Ninkaas ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay goob dukaan ah oo uu ku lahaa Xaafadda Wadajir Gaalkacyo dhanka xiga Galmudug, isla markaana u geeriyooday xabbado dhowr ah oo lagu dhuftay.
Ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Maxamed Shire (Seetar), waxaana goobta uu falkaas ka dhacay durbo ka baxsaday raggii hubeysnaa ka dambeeyay falkaas oo watay Bastoolado.
Dad ku sugnaa meel ku dhow goobta uu dilka ka dhacay ayaa waxaa ay ku warrameen in Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Maamulka Galmudug ee Gaalkacyo ay qaadeen Meydka Marxuum Cabdinaasir Maxamed.
Si kastaba weeraro iyo dilal qorsheysan ayaa horey sidaan oo kale ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, waxaana xusid mudan in falalkaas dhacay oo lagu dilay Mas’uuliyiin iyo dad kale ay mas’uuliyadooda sheegteen Al-shabaab.
Ciidanka Kumaandooska DANAB gaar ahaan Ururka 4-aad Guutada 16-aad ayaa howlgal Qorsheyn kafuliyeen deegaanka Yaaqbiri- Weyne oo kamid ah degaannada hoostaga degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in ujeedkooda uu ahaa u kuurgelida xaaladda degaanka oo maalmihii la soo dhaafay ay Al-Shabaab dadka Shacabka ah ka barakicinayeen.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in intii uu howlgalka socday dhanka waaxda Arrimaha Bulshada Ciidanka Kumaandooska DANAB ay u fidiyeen dadka deegaanka Yaaqbiri-Weyne kaalmo cawinaad ah,.kuwaas oo ay heeysatay xaalado kala duwan.
Ugu dambeyn Saraakiisha Ciidanka DANAB waxaa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaan ilaa ay ka saarayaan degaannada hoostaga degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dhowr jeer ayaa degaanka Yaaqbari- Weyne ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ku dagaalamay Ciidamada dowladda iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi weeraray.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa Aqalka Madaxtooyadda ee Magaalada baydhabo ku qaabilay Safiirka Dowlada Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Amb, Cabdifataax Sheekh Cabdullaahi.
Kulan ay yeesheen Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay wehlinayeen Xubno kamid ah Golihiisa Wasiirada iyo Safiirk Cabdifitaax ayaa waxaa looga hadlay Arimaha Doorashooyinka iyo Amniga degaannada Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed l(aftagareen) ayaa uga mahad celiyay dowladda Itoobiya taageerada dhanka Amniga ah oo ay siiso Maamulka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka dalbaday inay sii kordhiyaan.
Safiirka Dowlada Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Amb, Cabdifataax Sheekh Cabdullaahi ayaa dhankiisa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay sida loogu soo dhaweeyay Magaalada Baydhabo, isla markaana ay sii wadi doonaan wadashaqeynta ay la leeyihiin Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed.
Dowladda Itoobiya ayaa waxaa Ciidamo farabadan oo ku howlgalla Magaca AMISOM ay ka joogaan degaano badan oo ka tirsan degmooyinka Baay iyo Bakool, kuwaas oo ka qeyb qaata dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Wararka23 hours ago
Alshabaab Oo Weerar Ku Qaaday Ciidanka Kenya Ee Kusugan Gobolka Jubbada Hoose.
Maamulka Puntland Oo Sheegatay in Khilaafka Farmaajo iyo Rooble lagu Xalindino Garoowe.